बेलायतका राजकुमार विलियम्सलाई कोरोना संक्रमण भएको खुलासा – Khabar Silo
काठमाडौं : बेलायती राजकुमार विलियम्स गत अप्रिल महिनामै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको खुलेको छ। राजकुमार द ड्यूक अफ क्याम्ब्रिजलाई गएको अप्रिलमै संक्रमण भएको बीबीसीले उल्लेख गरेकाे छ। प्रिन्स अफ वेल्स अर्थात आफ्ना पिता कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकै बेला उनी पनि संक्रमित भएको बताइएको छ। संक्रमित भएको खबर सबैभन्दा पहिले प्रकाशित गरेको द सन पत्रिकाले ३८ वर्षे राजकुमारले आफ्नो संक्रमणको खबरले देशव्यापी चिन्ता नबढोस् कुरा भनेर गोप्य राखेको दाबी गरेको छ।
उनको उपचार राजदरबारका डाक्टरले गरेको र त्यस क्रममा सरकारी नियमको पालना भएको खबरमा उल्लेख छ।उपचारको अवधिमा राजकुमार नोर्फोकमा रहेको एन्मेर हलमा आइसोलेशनमा बसेको पत्रिकाले जनाएको छ। यसबारे केन्जिङ्गटन प्यालेसले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन पनि कोरोना संक्रमित भएर निको भइसकेका छन्।
काठमाडौं – राजधानीका पहिलाका व्यस्त बजार जानुहोस्– लाग्छ, अहिले देशमा कोरोना महामारी छ र ? जताततै भीडै भीड छ। चोक–चोकमा बन्द गरिएका ट्राफिक लाइट खोलिएका छन्। सवारी जाम सुरु भइसकेको छ। सडकपेटीमा पैदलयात्रुको चाप छ। अर्कातिर देशमा कोरोना संक्रमण प्रत्येक दिनजसो बढ्दो गतिमा छ। यससँगै चुनौती थपिएको छ– अब जोगिने कसरी ? संक्रमणको जुन उचाइमा […]
काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको ५० वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ ।लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट थलिएका उनको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्दिन खानले जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य बनेका उपाध्याय विसं २०४६ को जनआन्दोलनदेखि आबद्ध भई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए ।विसं २०५४ मा […]